Archive du 20170503
Honor� Rakotomanana Te ho filoha ?
Tenin�ny soratra masina sy ohabolan-drazana Malagasy tahaka ny fomba fanaony no nampihaingoan�ny filohan�ny Antenimierandoholona Honor� Rakotomanana ny kabary fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany amin�ity taona ity teny Anosikely omaly.
Jean Max Rakotomamonjy � Tsy zakan�ny vahoaka intsony ny fahasahiranana �
Tsy zakan�ny vahoaka intsony ny vidim-piainana ankehitriny, hoy i Jean Max Rakotomamonjy filohan�ny antenimierampirenena nandritra ny fanokafana tamin�ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohan�ny depiote teny Tsimbazaza omaly.
Raharaha senatera Lilyson sy senatera Rina Tsy hisalovana ny andraikitry ny hafa izahay
Hanafatrafarako an�ireo mpitsara foana, hoy ny filohan�ny Antenimierandoholona Honor� Rakotomanana teny Anosikely omaly talata 2 mey, ny hoe :
Riana Andriamandavy VII Nandentika ny filohan�ny SMM
Namaly bontana ny resabe etsy sy eroa manodidina ny raharaha Claudine Razaimamonjy ny loholona Riana Andriamandavy VII omaly teny amin�ny lapan�Anosikely.
Taratasin�i Jean Sao dia tokony hanao hatsikana ?
Sao dia any amin�ny tontolon�ny hatsikana ry Jean no mety aminareo a ! Asa raha tsapanareo fa rehefa tantaraina anie ilay zavatra ataonareo dia toy mampihomehy irery mihitsy indraindray e !
Fananganana trano eny Antehiroka Maro be no tsy ara-dal�na
Ny faran�ny taona 2016 no efa niroso tamin�ny fanentanana ireo mponina ao aminy Razakandrainy Bezoro, Ben�ny
Fikambanan-drelijiozy �Very fanahy mbola velona ny Malagasy�
Ny fikambanan-drelijiozy lahy sy vavy dia miasa amina sehatra ara-tsosialy maro,
Aoka izay ny balarora !
Ankalazaina anio ny andro iraisam-pirenena ho an�ny fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety, ka tsy very anjara amin�izany isika eto Madagasikara.
Fampiakarana vidin-tsolika Tsy misy mangarahara mihitsy
Niakatra fanindiminy ny vidin-tsolika tamin�ity taona ity, ka ny iray tamin�ireo dia ny tamin�ny volana febroary ihany no nihemotra tamin�ny fampiakarana ny governemanta sy ny kaompania
Fanakatonana sekoly koranika Tsy niteny izany aho, hoy ny minisitra
Ao anatin�ireo sekoly miisa 150 tsy manara-dal�na hatreto ireo sekoly koranika 16 fa tsy 190 araka ny heno tamin�ireo vaovao tamin�ny herinandro raha ny fanazavan�ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, Paul Rabary omaly.
Asa tanana Malagasy Mihavitsy ny akora ampiasaina fa raofin�ny vahiny
Misedra olana goavana ny amin�ny havitsian�ny akora hampiasainy amin�izao fotoana izao ireo mpanao asa tanana eto amintsika.